As of Sat, 08 Aug, 2020 18:20
ताप्लेजुङ-जिल्लाको सिरिजंगा गाउँपालिकाले आव ०७६-७७ मा ‘सिरिजंगा गाउँपालिकाको सान, उद्यमशील किसान’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘एक टोल, एक उत्पादन’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभामा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । हावापानी र भूगोल सुहाउँदो उत्पादन तथा कृषि उपजमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने ध्येयले कार्यक्रम समावेश गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले जानकारी दिए । गाउँपालिकाभित्रका ८ वटै वडाका गरी ७२ वटा टोललाई कम्तीमा एक-एक वटा कृषिजन्य उत्पादन गर्न अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । पत्यक्ष कृषक लक्षित कार्यक्रममा पत्येक टोललाई १-१ लाखका दरले ७२ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए । अध्यक्ष गुरुङले भने, “समुदायको मागको आधारमा बनेको बजेट व्यावहारिक हुने आशमा छौं ।
कृषि नै यस क्षेत्रको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा साझा जोड छ ।”
गाउँपालिकाको वडा नं. १ सिनामस्थित पाथीभरा टोलमा आलुखेतीमा १ लाख, थलायोङ र फुन्चेबुङमा अदुवाखेती १ लाख, बाँसबोटे टोलमा मकैखेती १ लाख, फावाखोलिङ टोलमा धानखेती १ लाख, हरन्दी टोलमा केराखेती १ लाख, डाँडागाउँ र सेदाङफुङमा टमाटरखेती गर्न १-१ लाख र मादिबुङमा सुन्तला र कागतीखेती प्रवद्र्धन गर्न १ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसैगरी वडा नं. २ आम्वेगुदिनस्थित बाबाहाङ, बारुन्दिन, बुँग्वा, खाम्दिम्बे, तिनथापा र आम्बेगुदिन टोलमा किवी तथा कफिका लागि १-१ लाखका दरले ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ल्हासा र खिरुवा टोलमा किवीका लागि २ लाख रुपैयाँ र फुंगफुंग टोलमा धान, मकै र कोदोखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँ छ । यसैगरी वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित २ लाख रुपैयाँ बुँग्वा र खाम्दिम्बे टोलमा कागती खेतीका लागि छुट्याइएको छ । वडा नं. ३ सिकैचास्थित वरक्पादेन र सेखेवा टोलमा किवीखेती गर्न १ लाखका दरले २ लाख छ । बोखिममा अदुवा, लसुन र अकबरे खुर्सानीका लागि १ लाख, कुञ्जारीमा मकैखेतीमा १ लाख, हिञ्चेबुङमा कागतीखेतीमा १ लाख विनियोजन गरेको छ । सिकैचामा दाँते ओखरका लागि १ लाख, ओजिथोकमा सुन्तला तथा कागती १ लाख, ओसेमा किवी र सुन्तला १ लाख, साङमागुमा किवी र सुन्तला र मसलाजन्यमा १ लाख विनियोजन गरेको छ । वडाको वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फको २ लाखसमेत हिमादेनमा किवी तथा फलफुलखेती कार्यक्रममा खर्च गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी वडा नं. ४ तेल्लोकस्थित फुन्द्रुवा, थुम्मा र खोयाङ सोवुदिन, लोखुदिनमा कागती र सुन्तला खेती गर्ने १-१लाखका दरले ४ लाख विनियोजन गरेको छ । खेसेवा र यारुङ सिञ्चेबुङमा किवी र बाहुन गाउँमा जैतुनखेतीका लागि १-१ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । वडा नं ५ पेदाङस्थित एथेबु मुक्तुरा, पेदाङ, सिम्बेक्ला, याङपाङ वरगुम्बा र होक्मा टोलमा धान खेती गर्न ५ लाख छ । चिचिहाङ लाजाङमा किवीका लागि १ लाख, गैरीगाउँ देउराली, माङ्जेवा र फुङफुङ वाइपा खुन्द्रुका टोलमा कोदोखेतीका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वडा नं ६ मामाखेस्थित लालीगँुरास टोल, थुम्बिम्बा देउराली, तेम्खाम्देन, मामाखे लिम्बु संग्राहालय टोल, सुक्तेन फाबेवुङ र सुनगाभा लेक्तेन कात्तिके, येमाथा, मिक्लादेन र सुदाप टोलमा किवी खेतीका लागि ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वडा नं. ७ खेवाङस्थित प्रभुथुम्का टोलमा एभोकाडो र मानेडाँडामा सुन्तला खेतीमा २ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरि वडा नं. ८ याम्फुदिनस्थित एकिम सामेथुङ, सिंहदेवी र माक्लुवा, टोलमा आलुखेतीका लागि ३ लाख र लालीगँुरास टोलमा मकै तथा कोदोखेतीमा २ लाख विनियोजन गरेको छ । वडाको वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको ३ लाख किवी तथा चियाखेतीमा विनियोजन गरेको वडाअध्यक्ष टाँसी शेर्पाले बताए ।
गाउँपालिकाको क्षेत्र भौगोलिक बनावटअनुसार लेक र बेसी भएकाले माटो सुहाउँदो कृषि उत्पादनका लागि गाउँपालिकास्थित कृषि शाखाले सहजीकरण गर्नेछ । किवी, कफी, कागती, सुन्तला, धान, मकै, कोदो र आलुलगायत उत्पादन वृद्धि गर्न कार्यक्रमले टेवा पुग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले बताए ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ‘कृषक अवलोकन भ्रमण’ शीर्षकमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्गानिक कृषि उत्पादन गरी अत्यावश्यक कृषि उपजमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएका स्थानीय तहका कृषकसँग अनुभव आदानप्रदान गर्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसैगरी कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक वडाका मुख्य–मुख्य खेतीयोग्य जमिनको माटो परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ लाख विनियोजन गरेको छ । अर्गानिक-कम्पोस्ट मलको प्रयोग गरी कृषिजन्य सामग्री उत्पादन गर्न सबै वडाका अगुवा कृषकलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ लाख विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाभित्रका सहकारी संस्थामा आबद्ध पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा ५ लाख र प्रत्येक वडाका अगुवा कृषक लक्षित व्यावसायिक पशुपालन तालिमका लागि विनियोजन गरेको छ ।